PPR ပိုက် HDPE ပိုက်ထောက်ပံ့သူများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအတွက် 75-110mm Socket Fusion Welding Machine - စက်ရုံစျေး - Sunplast
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > HDPE ပိုက်ဂဟေစက် > HDPE / PPR Socket Fusion ဂဟေဆော်စက် > PPR ပိုက် HDPE ပိုက်အတွက် 75-110mm Socket Fusion ဂဟေဆော်စက်
PPR ပိုက် HDPE ပိုက်အတွက် 75-110mm Socket Fusion ဂဟေဆော်စက်
75-110mm SPR Fusion ဂဟေဆော်စက် PPR ပိုက် HDPE ပိုက်အတွက်ရရှိနိုင် 75-110mm, လွယ်ကူသောလည်ပတ်, 1 နှစ်နှင့်အတူမျက်ခြေမပြတ်အရည်အသွေးမြင့်, တာရှည်ဝန်ဆောင်မှုအချိန်, ယှဉ်ပြိုင်လက္ကားစျေးနှုန်းများ။ အသေးစိတ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
PPR ပိုက် HDPE ပိုက်အတွက် 75-110မီလီမီတာSocket Fusion ဂဟေဆော်စက်
Socket fusion သည်သေးငယ်သောပိုက်များအတွက်အဓိကဂဟေဆော်နည်းဖြစ်သည်။ Socket ပေါင်းစပ်ဂဟေဆော်စက်ကို HDPE, PPR မှပြုလုပ်သောဂဟေဆော်သည့်ပိုက်များတွင်အဓိကအသုံးပြုသည်။ Socket fusion welding တွင် fitting တစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်းပါဝင်သည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်စစ်ဆင်ရေးယေဘုယျအားဖြင့်လက်စွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဂဟေသံသရာတွင်အပူအဆင့်နှင့်အအေးဓာတ်ပါဝင်သည်။ Socket fusion welding တွင် hot plate ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသော socket တစ်ခုကို welded လုပ်ထားသောပိုက်၏အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်ကိုအပူပေးရန်အသုံးပြုသည်။ အပူပြား၏ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ ဆေးထိုးပုံသဏ္ittingာန်၏အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်ကိုအပူပေးရန်အတွက်ရေစုပ်စက်ကိုအသုံးပြုသည်။
SUNPLAST socket fusion welding machine သည်လက်တွေ့ကျပြီးကိုင်တွယ်ရလွယ်ကူပြီးလုံခြုံသည်။ ဂဟေဆော်စက်ကိုချိန်ညှိနိုင်သောအီလက်ထရောနစ်အပူထိန်းကိရိယာ (TE) ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပုံသေအီလက်ထရွန်နစ်အပူထိန်းကိရိယာ (TFE) နှင့်ရနိုင်သည်။
ဒီ TFE ထိန်းချုပ်မှုစနစ်မှာ Self-diagnostic ကိရိယာသစ်တစ်ခုပါရှိပြီးသတိပေးချက်တစ်ခုပါရှိပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, အပူဒြပ်စင်အလိုအလျှောက်ပိတ်ထားလိမ့်မယ်။ platinu sensor နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည့် algorithm PID micro-controller ကြောင့်အပူချိန်ထိန်းညှိစနစ်သည်ပြင်ပအပူချိန်အတက်အကျကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာတုံ့ပြန်နိုင်ပြီးပိုမိုမြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်ကြာရှည်ခံမှုကိုအာမခံနိုင်သည်။
75-110မီလီမီတာHDPE ပိုက်နှင့် PPR ပိုက်အတွက် Socket ပေါင်းစပ်ဂဟေဆော်စက်
အလေးချိန် / CTN
23ကီလိုဂရမ် / CTN
အရွယ်အစား / CTN
ပုံမှန်အားဖြင့် 20ft ကွန်တိန်နာများအတွက်ရက်ပေါင်း 20 ခန့်
Sunplast, through over 15 years' development, is now known as one of the leading manufacturers and suppliers of 75-110မီလီမီတာsocket fusion welding machine for ppr pipe & hdpe pipe in China. Our factory has introduced many advanced technologies and equipments into it. Please be free to buy the quality and low price products made in China from us.
hot Tags:: ၇၅-၁၁၀mm PPR Pipe HDPE ပိုက်အတွက် Socket Fusion Welding Machine, တရုတ်၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ စက်ရုံ၊ စက်ရုံ၊ စျေး၊
PPR ပိုက် Socket Fusion ကိုဂဟေဆော်HDPE Socket Fusion WelderHDPE ပိုက်ဂဟေဆော်PPR ပိုက်ဂဟေဆော်PPR ဂဟေဆော်ppr socket ပေါင်းစပ်စက်socket ပေါင်းစပ်ဂဟေစက်ppr ဂဟေစက်ppr အပူစက်PPR Fusion စက်
PPR ပိုက် HDPE ပိုက်အတွက် 20-32mm Socket Fusion ဂဟေဆော်စက်
PPR ပိုက် HDPE ပိုက်အတွက် 20-63mm Socket Fusion ဂဟေဆော်စက်